iPhone Pro, Apple Watch 5, AirPods 3, iPad Pro cusub ... Mark Gurman oo bilaabay bamkiisii ​​ugu dambeeyay | Wararka IPhone
iPhone Pro, Apple Watch 5, AirPods 3, iPad Pro cusub ... Mark Gurman wuxuu bilaabay bamkiisii ​​ugu dambeeyay
Weli ma jiro xaqiijin rasmi ah, laakiin wax waliba waxay muujinayaan in bisha Sebtember ee soo socota 10 aan arki doonno iPhone-ka cusub ee 2019. Iyadoo ay dhacdo aad isugu dhowdahay, xanta ayaa badatay, sidii caadada u ahaydna, Mark Gurman wuxuu billaabay bamkiisii ​​ugu dambeeyay ee uu ku faahfaahinayo dhammaan wararka Apple ay hayso 2019kan iyo kuwa imaan doona 2020.
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan saddexda nooc ee iPhone-ka ah ee la bilaabi doono, wararka ku saabsan iPad Pro oo sidoo kale imaan doona dhammaadka sanadkan, iyo sidoo kale taxanaha Apple Watch 5 iyo 16-inch cusub ee MacBook Pro. Intaas waxaa sii dheer, badeecooyin kale oo Apple horeyba uga shaqeyneysey sida AirPods 3 cusub iyo HomePod Mini. Dhamaan faahfaahinta, hoosta.
3 Apple Watch, AirPods iyo HomePod
Apple waxay soo saari doontaa saddex gunood oo noocyadeeda casriga ah waxayna u muuqataa inay ka tagi doonto lambarrada magaceeda. IPhone Pro wuxuu noqon doonaa magaca taleefoonkan cusub shirkada iska badaleysa iPhone XS iyo XS Max, iyo waliba bedelka iPhone XR. Waxyaabaha ugu cusub ee noocan ah ee loo yaqaan '' Pro '' ayaa noqon doona kamaradda gadaal saddex-laabeysa ah leh xagal ballaadhan oo kuu oggolaan doonta inaad sawirro ku qaadatid aragti ballaadhan.
Sawir qaadid waxay qabaneysaa seddex sawir isla mar ahaantaana nidaamka sirdoonka macmalka ah ayaa si otomaatig ah u saxaya khaladaadka ay ogaato, sida qofka oo "laga jaro" sawirka. Qabsashada xaaladaha iftiinka yar waa la hagaajin doonaa, xallinta sawirradu sidoo kale way sii kordhi doonaan. Qabashada fiidiyowga sidoo kale waa la hagaajin doonaa, taasoo keeneysa iPhone-ka xitaa u dhow qalabka xirfadleyda. Waad kicin kartaa, dalaggan kartaa, codsan kartaa saamaynta oo aad beddeli kartaa midabada inta aan duubeyno fiidiyowga.
Terminal-yada cusub waxay ficil ahaan la mid noqon doonaan kuwa hadda jira marka loo eego muuqaalka dibedda, marka laga reebo in moodellada qaarkood ay dhabarka ku dhammayn doonaan matte, halkii ay ka ahaan lahaayeen dhaldhalaalka dhalaalaya ee hadda jira. Waxa kale oo ay u muuqataa in Apple waxaa ku jiri doona tikniyoolajiyad cusub oo muraayadda dambe ka dhigeysa mid u adkeysata dhicitaanka suurtagalka ah. Kaliya maahan in iska caabinta dhicitaanka la hagaajiyo, laakiin sidoo kale waxaa suuragal ah in la quusiyo biyaha.
Dhabarka gadaashiisa waxaan dib uga buuxin karnaa qaar ka mid ah qalabka Qi sida AirPods-ka cusub oo wata sanduuq lacag la aan ah, oo la mid ah waxa Galaxy S10 horey u sameysay. Nidaamka aqoonsiga wajiga (Aqoonsiga Face) ayaa si weyn kor ugu qaadi doona adoo kordhinaya aragtida dareemayaal, u oggolaanaya furitaanka aaladda xaaladaha "aan wanaagsaneyn" sida marka miiska la jiifo.
Shaashadda 'OLED' ayaa sidoo kale mari doonta isbeddello, iyadoo lagu hagaajinayo gudaha, 3D Touch sidoo kale waa la baabi'in doonaa, maadaama aan muddo dheer ka shakinay wixii aan ku aragnay iOS 13 Beta. Tikniyoolajiyadda 3D Touch ayaa baabi'i doonta iyada oo loo rogi doono Haptic Touch, wax Apple horay u sii daayay iPhone XR oo soo fiicnaanayay toddobaadyadii la soo dhaafay maaddaama Betas cusub oo iOS 13 ah la bilaabay.
Haddii aan ka tagno iPhone Pro oo aan diirada saarno isbeddelada bedelka iPhone XR (kaas oo Gurman uusan sheegin magaciisa, waxay noqon kartaa si fudud iPhone 2019) waxa ugu muhiimsan wuxuu ka imaan doonaa gacanta kamaradda, oo leh ujeedo laba-geesood ah taas oo u oggolaan doonta in la yeesho indho-indheyn muuqaal ah si loo soo qaado sawirro fog fog iyada oo aan lumin tayada, iyo hagaajinta qaabka sawirka. Waxaa sidoo kale jiri doona midab cagaaran oo cusub.
Dhammaan moodooyinka iPhone (Pro iyo 2019) ayaa lahaan doona processor-ka cusub ee A13, kaas oo yeelan doona isku-duwaha kaa caawin doona xaqiiqada la kordhiyay iyo howlaha sirdoonka macmalka ah, oo ay shirkaddu ugu yeerto "AMX". Ma jiro nooc yeelan doona 5G, ama kamaradaha 3D, taas waa inaan sugnaa illaa sanadka soo socda.
Apple sidoo kale waxay diyaarineysaa cusbooneysiinta noocyada iPad-ka dhammaadka sanadkan, waxayna ku sameyn doontaa moodello cusub oo iPad Pro ah, iyo sidoo kale iPad cusub oo "raqiis ah" oo beddelaya iPad-ka 2018. IPad-ka cusub wuxuu yeelan doonaa naqshad la mid ah kuwa hadda jira, iyadoo horumar laga helayo kaamirooyinka sida kuwa cusub ee iPhone Pro, iyo sidoo kale processor ka fiican (A13X). IPad 2019 wuxuu kordhin doonaa cabirka shaashadiisa ilaa 10,2 ″, isagoo ka tagaya heerkii caadiga ahaa ee 9,7 ″ ee uu adeegsaday tan iyo dhalashadiisii.
Apple Watch, AirPods iyo HomePod
Ka dib cusbooneysiintii sanadkii hore taas oo macnaheedu yahay kororka cabbirka shaashadda iyo processor-ka cusub ee ugu dambeyntii siiyay awoodda loo baahan yahay waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee isticmaale, Isbeddelada sanadkaan waxay noqon doonaan kuwo caqli badan, iyagoo diiradda saaraya hagaajinta ay soo bandhigi doonto watchOS 6. Waxaa jiri doona moodallo cusub oo titanium iyo dhoobada laga sameeyo, kuwaas oo lagu dari doono kuwa hadda ku jira aluminium iyo bir. Waan arki doonaa kahor dhammaadka 2019.
Apple ayaa diyaarinaysa qaar AirPod cusub oo ka qaalisan kan hadda jira. Qaar ka mid ah astaamaha iyaga ka sii dhigi doona "qiimo sare" waxay noqon doonaan biyo diidis iyo buuq baajin. Ma arki doonno AirPod-kan cusub illaa 2020. Waxa ka jaban ayaa ah HomePod «mini» cusub in shirkaddu sidoo kale u diyaar garoobeyso sanadka soo socda, iyo inay hoos uga dhici doonto $ 300 oo ah nooca hadda jira, laakiin taa beddelkeeda laga dhimayo faa iidooyinkeeda, sida in 7-da tweeter ee kan hadda hoos loo dhigo oo laga dhigo kaliya 2.
Apple ayaa diyaarinaysa ah MacBook Pro cusub oo leh shaashad 16-inji ah. Cabbirkiisa guud wax badan kama duwanaan doono kii 15 ″ MacBook Pro oo ay ugu mahad celinayaan kuwa yar yar. Waxay noqon laheyd MacBook Pro oo leh shaashada ugu weyn tan iyo markii Apple uu ka tagay 17 ″ 2012, wax ay xirfadlayaal badan dhaleeceeyeen oo Apple ay rabto inay saxdo. Waxay sidoo kale bilaabi doontaa Mac Pro oo horey loo shaaciyey iyo bandhigiisa 'XDR Pro' ka hor dhamaadka sanadka hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » iPhone Pro, Apple Watch 5, AirPods 3, iPad Pro cusub ... Mark Gurman wuxuu bilaabay bamkiisii ​​ugu dambeeyay
Ka faa'iideyso qiimo dhimista alaabta guriga laga helo ee Koogeek
Apple waxay dooneysaa inay yareyso ku tiirsanaanta shaashadaha Samsung OLED oo durba waxay leedahay waxyaabo kale